အမျိုးသမီးတွေ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုမိကြတဲ့ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရဲ့ သတိပေးလက္ခဏာ(၈)ခု - Lifestyle Myanmar
အမျိုးသမီးတွေ မကြာခဏ လျစ်လျူရှုမိကြတဲ့ အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးပြဿနာတွေရဲ့ သတိပေးလက္ခဏာ(၈)ခု
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်တွေဟာ အမြဲပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ အစောပိုင်းအဆင့်တွေမှာ ပြဿနာတွေကို ဖော်ထုတ်ဖို့ဆိုတာ သူတို့အတွက် ခက်ခဲပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းက အပြောင်းအလဲအနည်းဆုံးကိုတောင် အနီးကပ်အာရုံစိုက်မယ်ဆိုရင် သင့်ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး အနာဂတ်ပြဿနာတွေကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အချို့အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဗိုက်ပွခြင်းက လစဉ်ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှာ ကြုံရတဲ့ ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် သင့်မှာ လေပွ/ဗိုက်ပွတာ ဖြစ်နေကျမဟုတ်ရင်၊ ၂ပတ်ကျော်လောက် တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရပြီးပြီဆိုရင် ဒါက သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ တစ်ခုခု balance မဖြစ်တော့တဲ့ ပထမဆုံးလက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Endometriosis လို့ခေါ်တဲ့ မီးယပ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါမှာ သင့်ဝမ်းဗိုက်က အမြဲတမ်းဖောင်းနေနိုင်ပါတယ်။ “Endo belly” ဟာ များသောအားဖြင့် ခန့်မှန်းလို့မရပါဘူး။ bloating က ရက်ပေါင်းများစွာ ၊ ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာထိ ရှိနေနိုင်သလို နာရီအနည်းငယ်အတွင်း ပျောက်သွားလေ့ရှိပါတယ်။ ဗိုက်က အဆက်မပြတ်ဖောင်းကားတင်းနေရင် ရင်သားကင်ဆာ (သို့) သားအိမ်ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာဖြစ်နိုင်လို့ မပေါ့သင့်ပါဘူး။
၂။ မေးစေ့မှာ ဝက်ခြံတွေထွက်ခြင်း
ရာသီမလာခင် ၂ပတ်ခန့်အလိုမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အက်စထရိုဂျင်နဲ့ ပရိုဂျက်စတုန်းကို တိုးပွားစေပါတယ်။ ဟော်မုန်းပမာဏ ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် သင့်မေးစေ့မှာ ဝက်ခြံပေါက်လာပြီး အချိန်ကုန်လွန်သွားရင် ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
သို့သော် သင့်မေးရိုး (သို့) မေးစေ့မှာ ဝက်ခြံတွေ အဆက်မပြတ် တည်ရှိနေပါက ဟော်မုန်းတွေ မကောင်းဘူးလို့ဆိုလိုနိင်ပြီး နောက်မကျခင်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ ပြဖို့လိုပါတယ်။
၃။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အခါ နာကျင်မှုခံစားရတာ
အပြေး၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့် အချိန်ကြာမြင့်စွာ ရပ်တဲ့အခါ တင်ပါးဆုံတွင်းက မကြာခဏ နာကျင်မှုရှိတယ်ဆိုပါက ဒါဟာ endometrium ရောဂါလို့ ဆိုလိုနိုင်ပါတယ်။ သင့်သားအိမ်ရဲ့ အတွင်းပိုင်း တစ်ရှူးအလွှာတစ်မျိုးဟာ သားအိမ်မှာရှိရမယ့်အစား တစ်ခြားတစ်နေရာမှာ ဖြစ်တည်နေတာမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ foreign endometrial ဆဲလ်တွေနဲ့ အမာရွတ်က သင့်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေကို အတူတကွ ချည်နှောင်လိုက်တာကြောင့် နာကျင်မှုနှင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။
၄။ ခါးအောက်ပိုင်းနှင့် ခြေထောက်နာကျင်မှုကို ခံစားရတာ
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ လစဉ်ကာလအတွင်းမှာ ခါးနာတာက ပုံမှန်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတာကြောင့် သာမာန်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ရာသီမလာခင်၊ လာနေစဉ်နှင့် လာပြီးနောက်မှာ ကြွက်သားတင်းမာမှုနှင့်အတူ ပခုံးတွေနဲ့ ခါးတွေနာကျင်မှုကို ခံစားရလျှင် သင့်မှာ endometriosis ရောဂါရှိနိုင်ပါတယ်။ endometriosis ရဲ့အဖြစ်များတဲ့ လက္ခဏာတွေမှာ ခြေထောက် နာကျင်ခြင်း၊ တဖျဉ်းဖျဉ်းခံစားရခြင်း၊ ထုံခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုနာကျင်မှုက သင့်ခြေထောက်တစ်ချောင်း (သို့) နှစ်ဖက်စလုံးမှာ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်ပြီး period မတိုင်ခင်မှာ ပိုဆိုးရွားနိုင်ပါတယ်။
၅။ ရာသီသွေးအမြောက်အမြားဆင်းခြင်းနဲ့ သွေးခဲတွေပါခြင်း
လူတိုင်းရဲ့ period က မတူပါဘူး။ တစ်ချို့က နည်းပေမယ့် တစ်ချို့က ပိုများပါတယ်။ သို့သော် သင့်ရာသီသွေးဟာ အရောင်ရင့်လာပြီး သွေးခဲတွေ အမြဲပါနေရင်၊ အများကြီးဆင်းရင် သင့်မှာ uterine fibroids (သားအိမ်အလုံး) ရှိနေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သားအိမ်ထဲမှာ ဒီကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ ကြီးထွားမှုက မူမမှန်သွေးထွက်ခြင်းနှင့် ဆီးအိမ်ပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
၆။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ အစားအစာတွေကို စိတ်မဝင်စားတာ
အချိန်တိုင်း ဗိုက်အင့်နေသလိုခံစားရပြီး အစာနည်းနည်းကိုတောင်မှ လက်ခံဖို့ ခက်ခဲနေပါသလား? သင့်ရဲ့ အစာစားချင်စိတ်တွေ မကြာသေးခင်က ပျောက်ဆုံးသွားပြီလား? သင့်ရဲ့ ပုံမှန်စားသောက်ခြင်းအလေ့အထမှာ ဒီပြောင်းလဲမှုအားလုံးက အထူးသဖြင့် ဗိုက်နာခြင်း၊ ဝမ်းအကျင့်ပြောင်းလဲခြင်းတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ရင် သားအိမ်ကင်ဆာရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းက ဆံပင်ထုတ်လုပ်မှုကို ထောက်ပံ့ပေးထားသော တက်စတိုစရုန်းလို့ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းနိမ့်သော လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဟော်မုန်းမညီမှုတာ သေချာနေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခုက သင့်ဦးခေါင်းပေါ်မှာ ဆံပင်အကွက်လိုက် အကွက်လိုက်ပြောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သင့်ခြေသလုံးနှင့် ချိုင်းမွေးကို ပုံမှန်ရိတ်တယ်ဆိုရင် ဒီလက္ခဏာကို တော်ယုံသတိမထားမိသော်လည်း ခန္ဓာကိုယ်အမွေးကိုလည်း သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
၈။ အမြဲတမ်း ပူလွန်း၊ အေးလွန်းနေတာ
အခန်းအပူချိန်က ဘယ်တော့မှ သက်တောင့်သက်သာ မဖြစ်ဘူးလို့ခံစားရရင် သင့်မှာ ဟော်မုန်း မညီမျှတာ ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဖြစ်ပွားရတဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက မမျိုးပွားမှုကို ထိန်းညှိပေးတဲ့ ဟော်မုန်း အီစတိုဂျင်လယ်ဗယ် မညီမျှမှုကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းက ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနဲ့ ရာသီလာခြင်းသံသရာတစ်လျှောက်လုံးမှာ ပြောင်းလဲမှုရှိသော်လည်း တစ်ခါတစ်ရံ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာ မျိုးပွားမှု ပြဿနာရှိနိုင်ပါတယ်။ အက်စထရိုဂျင်ပမာဏက သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကို သက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် အက်စထရိုဂျင်နိမ့်တာက ပူပြင်းတာကိုခံစားရပြီး အက်စထိုဂျင်မြင့်မားခြင်းက သင့်လက်နှင့်ခြေထောက်တွေ အမြဲတမ်းအေးခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။